အီစတာသည်ရထားဖြင့်ဗင်းနစ်ရန် Get လုပ်နည်း | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ဥရောပခရီးသွား > အီစတာသည်ရထားဖြင့်ဗင်းနစ်ရန် Get လုပ်နည်း
ဗင်းနစ်အီတလီမှာအများဆုံးဖှယျနှင့်မှော်မြို့တသည်နှင့်ဖြစ်ပါတယ် ရထားအလွယ်တကူ. အီစတာစဉ်အတွင်းဗင်းနစ်သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းအားဖြင့် အားလပ်ရက်, သင်ခံစားနိုငျ သာယာသောနွေဦးရာသီဥတုက. ဒါဟာသင်အိမ်ပြင်တနေ့လုံးဖြုန်းဖို့ခွင့်ပြု. ရေပေါ်မှာသမိုင်းဝင်စင်တာမှခရီးသွားခြင်း, ထဲမှာယူ ခမ်းနားရှုခင်း ဒါမှမဟုတ်အမြည်း အရသာအစားအစာ of Venice for the perfect Easter break. ဤတွင်အီစတာများအတွက်ရထားဗင်းနစ်ရပုံ.
ဗင်းသည် ရံရေအားဖြင့် but it is well connected to the mainland and the rest of the world thanks to its efficient railways. နှစ်တွေအီစတာအားလပ်ရက်ကာလအတွင်းဗင်းနစ် ပို. ပို. လူကြိုက်များဖြစ်လာသည်, နှင့် လေကြောင်းလိုင်းများမကြာခဏသူတို့ရဲ့စျေးနှုန်းတွေကိုတိုးမြှင့် ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဝယ်လိုအားများ. သို့သျောလညျး, ဗင်းနစ်မှမှန်မှန်ပြေးရထား, so travelers can takealow-cost flight to Milan or Treviso and from there, ရထားယူ ဗင်းနစ်မှ.
ရရန်အလွန်လွယ်ကူသောကြောင့် ဗင်းနစ် ရထားအားဖြင့်အီစတာချိုးစဉ်အတွင်း. အဓိက မီးရထားဘူတာရုံ, Venezia Santa Lucia gives you access to every point of the city center on foot or by waterbus. ဤသည်ဗဟိုမီးရထားဘူတာရုံနိုင်ငံအများအပြားနှင့်အခြားအီတလီမြို့ရွာနှင့်အတူမြို့ကိုဆက်သွယ်.
Another good option is to get the train to Venezia-Mestre station. ဤသူသည်သင်တို့ကိုသင်တို့ရှေ့မှာမြင်သောပထမဦးဆုံးမီးရထားဘူတာရုံဖြစ်ပါသည် တံတားဖြတ်သန်း သောလှပသောဂွအထိချဲ့. The Venezia-Mestre station is accessible from all the nearest cities by train.
အစောပိုင်းစာအုပ် – Venice by train for Easter
ဖြစ်ရပ်များ and celebrations take place during the Easter holidays in Venice. သင့်ရဲ့စီစဉ်ခြင်းနှင့်စာအုပ်ဆိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်ဒါဟာဖြစ်ပါသည် ကြိုတင်မဲအတွက်ရထား.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပေါ်မှာငါတို့ကနောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုထုတ်စစ်ဆေး Facebook က နှင့် တွစ်တာ အကောင့်များနှင့်ဗင်းနစ်၌သင်တို့၏အီစတာအားလပ်ရက်အဘို့သင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများ START.
သငျသညျရှေ့တျော၌ဗင်းနစ်အတွက်အီစတာကျင်းပပြီ? Let us know about your experience by tweeting us at @SaveATrain! နှင့် အွန်လိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုသွားရောက်ကြည့်ရှု အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သီးသန့်ကိုပုံမှန်အတိုင်းထုတ်စစ်ဆေးနှင့်သင်၏နောက်စွန့်စားမှုစီစဉ်စတင်ရန်!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://embed.ly/code?url = https://www.saveatrain.com/blog/how-to-get-to-venice-by-train-for-easter/ - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/ru_routes_sitemap.xml, သင်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများ fr သို့မဟုတ် / / ရန် / ru ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
easter ရထားအကြံပေးချက်များ ရထားခရီးသွား travelvenice